Abavelisi beBayibon abaThengisi -iTshayina abaFundi beeVenkile zeVenic kunye nefektri
Iblack Canvas Chef Bib Apron enezingxobo zontathu i-CU335S001022U4
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU335S001022U4 ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili chef apron, bib apron, canvas apron, iindwendwe iyunifomu Indwangu 45/55 poly / ikotoni GSM.300g Ukuthunga Umsonto wePolyester intambo ukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayixhasi i-corrosion, ukumelana ...
I-Poly Cotton Crossback Ikhitshi I-Chef Apons CU352S119000AG
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU352S119000AG ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, ipron Fabric 70/30 poly / ikotoni GSM.265g Umtya wokuthungelanisa umsonto ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayisiva mbungu ....
I-Poly Cotton Crossback Ikhitshi I-Chef Apons CU352S118000AG
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU352S118000AG ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, ipron Fabric 70/30 poly / ikotoni GSM.265g Umtya wokuthungela umsonto onguPhezulu ubizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayisiva mbungu ....
I-Poly Cotton Crossback Ikhitshi i-Chef ii-CU352S117000AG
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU352S117000AG ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, ipron Fabric 70/30 poly / ikotoni GSM.265g Ukuthunga Umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayisiva mbungu ....
IDenim Bib Corssback Ikhitshi Chef Apron CU352S129000T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU352S129000T size SIZE Amagama aphambili I-COSSBACK i-apron, ikhitshi ekhitshini Indwangu 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana ne-isikhutha, kwaye aka ...
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU355S134011U4 ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili Isikhumba esinomphambili we-apron, umphezulu we-chef apron Fabric Genuine Leather Sewing Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-mildew, kwaye ...